Fampidinana: 6,883 alaina 914,522 fotoana.
FS2004 / FSX Dassault Mercure miaraka amin'ny tontonana nohavaozina. Ny fonosana dia misy tontonana 2D sy VC namboarina ho modely sy nohavaozina avokoa, satria ny default default VC dia manjavozavo sy tsy mahasarika miaraka amina metatra vitsivitsy ihany. Ny tontonana 2D dia mitovy amin'ny tontonana AFG Caravelle tany am-boalohany nataon'i Benoit Gaurant ary ny VC dia mifanitsy amin'ny tontonana 2D amin'ny ankabeazany. Anisan'izany ireo loko hafa voafantina telo avy ao amin'ny fonosana fandokoana, navoakan'i Patrick Mtiteanu. Ny setroka setroka vaovao koa dia nampiana amin'ny maodely. Modely voalohany nataon'i Capt. I. Attomo sy Cat. Giovanni Quai, tontonana 2D nosoratan'i Benoit Gaurant ary valiny telo avy amin'i Patrick Mititeanu. Fanamboarana sy fanatsarana VC vaovao ary koa ny vokatry ny setroka avy amin'i Michael Pook.
Anaran'ny fisie fsx_dassault_mercure_updated.zip
Nanana herinandro vitsivitsy be izahay nampiomana an'i Manchester ho ampiana amin'ny tsenambarotra sim! Elaela vao hiseho eo io, ary ho an'ireo rehetra izay nividy azy tamin'ny tranokalanay, dia hanana ny fomba fanavaozana alohan'ny hamoahana ireo fanavaozana ny tsena ianao! Topazo maso ny zavatra nataontsika tamin'ity indray mitoraka ity. Manchester Airport (EGCC) dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Ringway, Manchester, Angletera, 7.5 kilaometatra atsimoandrefan'ny afovoan-tanànan'i Manchester. Tamin'ny taona 2019, ...
Nanavao ny seranam-piaramanidina Vienna (LOWW) ho an'ny X-Plane 11, ho an'ny andiany 1.2, ny mpamorona ny fizaran-tany Gaya Gaya. Miala tsiny amin'ny fanemorana an'ity iray ity, nanamboatra fanamboarana vaovao marobe izahay ary mihevitra izahay fa mendrika ny fotoana fampandrosoana fanampiny! Manantena izahay fa mankafy! Zava-nisongadina tao amin'ny terminal pier avaratra izao dia misy maodely anatiny! Ny fitaovan'ny serivisy eto an-tany izao dia manana endriny tsara kokoa Modely vaovao ho an'ny static A320 an'i Aostraliana miaraka amin'ny endriny marina sy ny maotera
X-Plane 11.52 dia patch-fix bug-fix izay misy ankehitriny. Ity famotsorana ity dia misy fanamboarana lozam-pifamoivoizana amin'ny kaody tambajotra, ary ny zotra komandy miasa ho an'ireo mpampiasa tsy afaka miditra amin'ny sehatra tsy misy fianjerana. Fanamarihana famoahana feno azo jerena eto. SourceRelease Notes
Tao amin'ny forum Orbx, Ed Correia dia nanome fanavaozana ny fampandrosoana amin'ny openLC Asia ho an'ny P3D. openLC dia manova ny landclass ao anaty sim-nao mba hifanaraka tsara amin'ny tena tontolo, ary manome traikefa manankarena kokoa ho an'ny antsipirihany rehefa manidina ianao: Salama daholo, fanavaozana kely ary topi-maso vaovao. Elaela kokoa noho ny noeritreretina ny fampandrosoana satria ny variant P3Dv5 dia mila asa bebe kokoa amin'ny fanilikilihana ny làlana faharoa sy fahatelo. Raha tsy misy ireo fanilikilihana ireo dia mahita lalana marobe manapaka ...
Raha heverina, ny tetik'asa VSKYLABS Robinson telo (R22 / R44 / R66) telo dia novolavolaina niaraka tamin'ny ezaka lehibe sy ny fandrindrana. Ny R66 no voalohany nahatratra ny laharam-pahamehana v1.0, narahina valo volana taty aoriana tamin'ny famotsorana R44 v1.0 izay dingana iray lehibe amin'ny fampivoarana ireo lafiny manan-danja maromaro amin'ny VSKYLABS R22. Ny R44 v1.0 dia zava-dehibe koa teo amin'ny fanomanana ny laharana faha-2 VSKYLABS R66 (nomanina miaraka amin'ny cockpit analog mahazatra ao anatin'ny tetikasa ...
Las Vegas ho an'ny MSFS dia nohavaozina ho v1.3. Fiovana: Resorts World Las Vegas dia nanampy tamin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fanatsarana ny zava-bita noho ny v1.2 Fanatsarana ny endrika sy ny fanoloana ny zava-kanto 3D ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena McCarran dia seranam-piaramanidina iraisampirenena ao Paradise, Nevada ary ny seranam-piaramanidina lehibe ho an'ny besinimaro ampiasaina any amin'ny Las Vegas Valley , faritra an-tanàn-dehibe ao amin'ny fanjakan'ny Etazonia any Nevada, tokony ho 5 km atsimon'ny Downtown Las Vegas. Source
Fotoana hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny shadeX Plugin ho avy atrehintsika: Namboarina voalohany ho fitaovana pikantsary tamin'ny voalohany dia hita fa mety hahasoa ny X-Plane amin'ny ankapobeny ny vokany. Noho izany dia niafara tamin'ny fametahana plugin Plugin misy effets tsy manam-paharoa izahay, izay manamarika indrindra ny halalin'ilay blur eny an-tsaha. Na dia i shadeX mahery aza dia mifantoka amin'ny fampiasana mpampiasa sy mora ampiasaina. Vao niditra beta izahay ka tsy ho ela. Source
KDEN dia nohavaozina amin'ny kinova 1.4, nitondra fanovana lehibe sasany teo amin'ny seranam-piaramanidina. Amin'ny maha addon fandefasana MSFS azy, nandalo fanaintainana nitombo niaraka tamin'ny simulator vaovao i KDEN. Ny fanamby lehibe indrindra dia ny fampidirana ireo tany goavambe amin'ny seranam-piaramanidina ho ao anaty sim. Tamin'ny fanombohana, ny SDK an'ny MSFS dia voafetra tokoa raha ny fahaizan'ny terraforming. Niafara tamin'ny làlan'ny taxibe marobe izany ary na dia ny lalana mihazakazaka aza dia somary mideza .. ary misy zotram-pizahana sasany manana sisiny sarotra. Nanomboka teo dia maro ny vaovao ...